नेपालमा पेट्रोल ! दैलेखमा थालियो पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण «
नेपालमा पेट्रोल ! दैलेखमा थालियो पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण
प्रकाशित मिति : 1 July, 2019 8:17 pm
दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य सुरु भएको छ। सोमबारबाट चिनियाँ टोलीले अन्वेषणको कार्य सुरु गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि चाईना जिओलोजिकल सर्भेको टोली आइतबार दैलेख गएको थियो।
चाइना जियोलोजिकल सर्भे र खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले दैलेखका श्रीस्थान, नाविस्था, धुलेश्वर र पादुका कोटिलामा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्नेछ। श्रीस्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने सम्भावना अध्ययन वर्षौं अघि गरिएको भएपनि सम्भावना भएका अरु स्थानमा यसपटक अध्ययन गर्न आएको टोलीमा नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ भूगर्भविद् ट्यान फूयनले बताए।
टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको क्षेत्रमा ड्रिलिङ गरेर अन्वेषण गर्ने जनाइएको छ। यसअघि प्रारम्भिक अध्ययनबाट पञ्चकोशी क्षेत्रमा एलपी ग्यासको खानी रहेको पत्ता लागेको थियो। पत्ता लागेको एलपी ग्यास उत्खननका लागि योग्य भए/नभएको अन्वेषणपछि थाहा हुने खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक सुधीर रजौरेले बताए। उनका अनुसार जमिनको ५ देखि २० किलोमिटर सतहमुनिको बनावटको अध्ययन गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थ जम्मा भएर बस्ने संरचना पत्ता लगाउन सकिनेछ।
अन्वेषणका क्रममा जमिनमुनि कम्पन पठाएर ड्रिलिङ गरिनेछ। ड्रिलिङ गरिसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थ कति मात्रामा छ र आर्थिक रुपमा उत्खनन गर्न मिल्ने छ वा छैन भन्नेबार थाहा हुने रजौरेले बताए।
व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गर्न सम्भव भए कुन क्षेत्रमा उत्खनन् गर्दा सहज हुन्छ भनेर विस्तृत रुपमा जानकारी लिन अन्वेषण गर्न थालिएको उनले बताए। ‘पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण र व्यावसायिकताबारे अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली यहाँ आएको हो’ उनले भने।
दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्का लागि सन् २०१८ फेब्रुअरी २८ मा नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता भएको हो। यसअघि वैशाख अन्तिम साता चिनियाँ टोली अन्वेषणका लागि आउने मिति तोकिए पनि टोली भने दुई महिना ढिलो आएको हो।
पञ्चकोसी क्षेत्रमा दशकौँदेखि निरन्तर ज्वाला बल्ने गरेको छ । उक्त ज्वाला मिथेन ग्याँस भएको प्रमाणित भइसकेको छ। चिनियाँ टोलीले २०७२ मा उक्त क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको थियो।